विवाह भएको बाह्र वर्ष भइसक्दा पनि मेरो घरको बगैँचामा कुनै सुन्दर फूल फुल्न सकेको थिएन । बाह्र वर्षमा त बगेको खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, तर मेरो भाग्यको खोला भने अहिलेसम्म फर्केन । मेरो रहर, रहरैमा सीमित भइरहेको छ ।
आफ्ना दौँतरी र तल्लो पिढीँ समेतकाको काख भरिसक्दा पनि मेरो काख भने रित्तै थियो । काख भरिएला भनेर बाह्र वर्षसम्म मैले के–के पो गरिनँ होला ! तर जे गर्दा पनि, जहाँ जाँदा पनि हात लाग्यो शून्य मात्रै ।
धामी, झाँक्री, आयुर्वेदिक, आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका अनेक दबाइले नभएर तान्त्रिककहाँसमेत धाउन बाँकी राखिनँ, पैसाको खोलो बगाउँदासमेत मेरो केही लागेन ।
जुन डाक्टरलाई देखाए पनि ‘तपाईं आमा बन्न पूर्ण रुपले सक्षम र स्वस्थ हुनुहुन्छ’ भन्छन् । ‘त्यस्तो खराबी केही देखिन्न, बरू एकपटक तपाईंको श्रीमान्लाई पनि साथै लिएर आउनुहोस् अनि दुबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र भन्न सक्छौँ कसको तर्फबाट नभएको हो भनेर’ भन्ने गर्थे । त्यसैले, मैले मेरो श्रीमान्लाई हजारौँ पटक अनुनय–विनय गरेँ । तर अहँ, उहाँ पटक्कै मान्दै मान्नुहुन्न, भन्नुहुन्छ, ‘म एकदमै ठीक छु, स्वस्थ छु, मैले जँचाउनै पर्दैन ।’ मेरो मुखमा बुझो हाल्ने काम मात्रै गर्नुभयो सधैँ ।
सायद, उहाँलाई आफ्नो पुरूषत्वको धज्जी उड्ला कि वा आफ्नो पुरूष अहङ्कारले घुँडा टेक्नुपर्ने पो हो कि भन्ने डर व्याप्त भएर पनि हुन सक्छ, जति पटक आग्रह गर्दा पनि डेक नचलेपछि मैले पनि भन्नै छाडेँ ।
कति पटक त मैले श्रीमान्समक्ष कोख भाडामा लिने वा सौता नै हाल्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । तर उहाँले सधैँ एउटै रेडिमेड जबाफ दिने गर्नुहुन्थ्यो— ‘आ... नदुखेको टाउको डोरीले बाँधीबाँधी किन दुखाउँछ्यौ तिमी ? भए तिमीबाटै होला ! नभए हाम्रो भाग्यमै रहेनछ भनेर चित्त बुझाउँला ।’
सधैँ यसो भनिरहनुहुँदा, लाग्थ्यो कुरो ठिकै पनि हो । यसरी अरुको कोख भाडामा लिएर वा सौता नै हालेर जन्माएको बच्चालाई उनीहरुकै आमाले नखोस्लान् भन्न पनि त सकिन्न नि ! यदि मलाई नै दिए भने पनि मैले आफैले जन्माएको बच्चालाई जस्तो सच्चा माया र वात्सल्य दिन सक्ने हो वा होइन ! द्विविधाले पनि लखेटिरहन्थ्यो मलाई । फेरि डाक्टरले म पूर्ण रुपमा आमा हुन सक्षम छु भनेकाले झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि बाँकी नै थियो मनको कुनै कुनानिर । त्यसैले किन बाँझी आइमाईको पगरी गुँथिरहने भन्ने पनि लाग्थ्यो र चुपै लागेर बस्थेँ ।
मनभित्र सधैँ एक प्रकारको मोह जागिरहन्थ्यो, आफै गर्भवती भएर हरेक क्षण आफूभित्रको भ्रूण विकसित भएको आफैले आत्मसात् गर्न चाहन्थेँ । पूर्ण रुपमा आमा हुनुको अनुभव र अनुभूति सँगाल्न चाहन्थेँ । आमा हुनुको गौरव प्राप्त गर्न चाहन्थेँ म । अर्काको कोख भाडामा लिने वा सौता हाल्ने अनुमति यो मनले नदिँदा नदिँदै पनि आमा बन्ने लालसा यति तीव्र थियो कि जसरी पनि तिर्खा मेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र लागिरहन्थ्यो । आमा बन्ने अभीप्साले सधँै छोपिरहन्थ्यो ।
कुनै पनि प्रयत्न सफल हुन नसकेपछि बिस्तार–बिस्तार मलाई आफ्नो अस्तित्वप्रति नै घृणा लाग्न थाल्यो । निराशाको सघन अन्धकारभित्र रूमल्लिँदै तनावग्रस्त रहन थालेँ ।
प्राकृतिक तरिकाले गर्भवती हुन नसकेपछि मलाई मेरा श्रीमान्को सामीप्यसमेत बिझाउने काडाँझैँ हुन थालेको थियो । न कुनै आतुरता न त व्यग्रता नै । श्रीमान्को जैविक आवश्यकताप्रति पनि कति वितृष्णा लाग्थ्यो भने पत्नीधर्म निर्वाह गर्न पनि मलाई ज्यादै कठिन भइरहेको थियो । मेरा दिनहरु प्रायः चिन्तामै बित्ने गर्थे भने रात अभिशापमा । म पीडाको अथाह सागरभित्र डुब्दै थिएँ ।
यसरी म असीमित पीडाका पहाडहरु आफैभित्र बोकेर हिँड्थेँ ।
कुनै पनि स्वास्नीमान्छे आमा नबनेसम्म अपूर्ण नै हुन्छन् । तर बाँझी हुनु पूर्वजन्मको पाप हो, बाँझी आइमाईको मुख हेर्दा साइत बिग्रन्छ भन्ने समाजको नकारात्मक टीका–टिप्पणी र लाञ्छनाका तीखा बाण मुटुमै रोपिन आउँदा भने म कति मर्माहत हुन्थेँ भन्ने कुरा या त सधैँ रूझ्ने मेरो सिरानीलाई थाहा होला, या त सधैँ दुख्ने मेरो मुटुलाई । कटाक्षका कतिकति तिखा बाणहरुलाई छातीमा थाप्दै आँखाबाट गङ्गा–जमुना बगाइरहनुबाहेक अरु के नै पो गर्न सक्थेँ र मैले ?
एक्काइसौँ शताब्दी लागिसक्दा पनि सन्तान नहुनाको प्रमुख कारण स्वास्नीमान्छेलाई मान्ने पुरातन अवधारणाबाट मुक्त हुनै चाहँदैनन् कोही पनि । सारा दोष मजस्ता स्वास्नीमान्छेको टाउकोमा थुपारेर आफूहरु भने दोषमुक्त भएर हिँड्न चाहन्छन् लोग्नेमान्छेहरु ।
यस्तैमा एक दिन उहाँको गैर आवासीय साथी उहाँलाई भेट्न हाम्रो घर आउनुभयो । उहाँ मेरो श्रीमान्को बाल्यकालदेखिको साथी मात्रै नभएर सँगै खेल्दै–हुर्कंर्दै स्कुल र कलेजसम्म पनि साथसाथै पढ्नुभएको, तर उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश गएपछि पढाइ सकेर केही वर्ष राम्रो कम्पनीमा जागिर खाएपछि बिस्तार–बिस्तार आफ्नो निजी व्यापार व्यवसाय सुरू गरेर उहाँले निकै नाम र दाम कमाएको कुरा मैले मेरो श्रीमान्बाट पटकपटक सुनेकी छु । त्यसो त दुबै जना अनलाइनमा भेट हुनासाथ च्याटिङ गर्ने, इमेल पठाउने र बेलामौकामा टेलिफोन पनि गरिरहनुहुन्थ्यो । त्यसैले पनि हो कि, पहिलो पटक साक्षात्कार हँुदासमेत पहिलो भेटजस्तो भने पटक्कै लागेन मलाई ।
धेरै वर्षपछि भेट भएका दुबै साथी, न्यानो अँगालोमा बाँधिएर खुसी साटासाट गर्दा दुबैका अनुहारभरि असीमित सुखानुभूतिका लहरहरु उर्लिरहेका प्रस्टै देखिन्थे । एकछिन त मेरो उपस्थितिसमेत बिर्सेर हराउनुभयो दुबै एकअर्कामा । म दुबै साथीको आत्मीयता पिउँदै थिएँ, निर्निमेष ।
मलाई छेउमा उभिएकी देखेर उहाँको साथीले अनुमानको खेती लगाउदै भन्नुभयो— ‘भाउजू हुनुहुन्छ होइन ?’ प्रत्युत्तरमा मैले मधुर मुस्कान छर्दै टाउको हल्लाएँ मात्र । साथीलाई अँगालोबाट छुटाउँदै दुबै हात जोडेर नमस्कार गर्दै भन्नुभयो— ‘यसको विवाहमा म उपस्थित हुन पाइनँ । त्यसैले मेरो भोज उधारै छ है भाउजू ! मैले यसलाई कति पटक भाउजूलाई सँगै लिएर आइज भनेको, खै आएको होइन । कहिले के, कहिले के भन्दै टारी मात्रै राख्यो । ओहो ! दिन जान पनि कति बेर लाग्दो रहेछ र ! हिजैजस्तो लागेको थियो यसले विवाह गरेको, तर कति चाँडै बाह्र वर्ष भइसकेछ ! यो नआउने नै भयो भन्ने सोचेर म नै आएँ यसलाई भेट्न । कस्तो लाग्यो त भाउजू मेरो सरप्राइज हजुरलाई ?’
मेरा श्रीमान्ले उहाँको कुरा बीचमै काटेर भन्नुभयो— ‘अरु कुरा छोड्, तँ कहाँ बसेको छस् ?’ साथी कुनै पाँचतारे होटलमा बसेको कुरा थाहा पाउनसाथ मेरा श्रीमान्ले रिसाउदै भन्न थाल्नुभयो— ‘मुला, मेरो घर हुँदाहुँदै तँ किन होटलमा बस्न गइस् ? मेरो घर कुनै पाँचतारे होटलभन्दा धेरै सानो होला, सुबिधा सम्पन्न नहोला, तर मेरो आत्मीयता र मेरो मन भने त्यो पाँचतारे होटलकोभन्दा कम छैन । फेरि तत्काल उठ्दै भन्नुभयो— ‘ल ल तुरून्तै हिँड्, होटल चेकआउट गर्न ।’ एउटा नजिकको साथीप्रति देखाउने सद्भाव र आत्मीयता दुबै खन्याउनुभयो एकैपल्ट ।
आफ्नो साथीको मीठो आग्रह टार्न नसकेरै होला होटल चेक–आउट गरेर उहाँ हामीकहाँ नै बस्ने गरेर आउनुभयो ।
उहाँ विदेशमा आफ्नो व्यापार–व्यवसायबाट राम्रो सफलता हासिल गरिसकेर अब भने आफू जन्मेको देशको लागि पनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यसमेत बोकेर धेरै वर्षपछि नेपाल आउनुभएको रहेछ, करिब एक–डेढ महिनाजतिका लागि मात्र । त्यस उद्देश्यमा विशेष गरी द्वन्द्वपीडित असहाय महिला र बालबालिकाहरुका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पुनीत भावना समेटिएको थियो ।
मान्छे दयालु मात्र नभई हेर्दामा पनि खाइलाग्दो !
एउटा भद्र पुरूषमा हुनुपर्ने सबै गुण भएको । त्यतिको नाम र दाम कमाइसकेको व्यक्तिमा लेस मात्र पनि घमन्ड देखिन्न ।
यतिका वर्ष बिरानो भूमिमा बिताए पनि आफ्नो माटोप्रति अगाध माया र स्नेह भएको, नेपाल र नेपालीप्रति केही गरौँ भन्ने भावना र चाहना भएको, जोस र जाँगरले भरिएको आर्कषक व्यक्तित्वका धनी । फरासिलो मिजासले गर्दा मसँग पनि घुलमिल हुन बेरै लागेन उहाँलाई ।
उहाँ एक्लो सन्तान भएकाले आना बुबामुमालाई पनि उतै बोलाएर आफैसँग राखेको र धेरै वर्षपछि दुबैको स्वर्गवास भइसकेको थियो । बुबामुमाले छोराको विवाह हेर्न साह्रै रहर गर्दागर्दै पनि उहाँलाई विवाहप्रति त्यति मोह नभएको कारणले गर्दा विवाह नै गर्नु भएन । पछि त ‘बुबामुमा हुँदै नगरेको विवाह अब झन् किन गर्नुपर्‍यो !’ भन्दै बिहे नै गर्नु भएन । अहिलेसम्म पनि अविवाहितै हुनुहुन्छ ।
‘पश्चिमी मुलुकहरुमा जैविक आवश्यकताका लागि कुनै असुविधा नभएको र विवाह बन्धनभित्र बाँधिएर बस्न नचाहेरै विवाह गरिनँ । स्वतन्त्र रुपले आफूखुसी बस्नका लागि मैले विवाह नगरेको ।’ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफै ।
उहाँले मलाई जति नै आना कुराहरु बाँड्न चाहे पनि, मलाई जति नै हँसाउने प्रयत्न गर्दा पनि हाँस्नु र खुसी हुनुको साटो उल्टै चिन्तित र उदास देखेर होला मप्रति झन् बढी चासो देखाउन थाल्नुभयो ।
मेरो चिन्ता र उदासीका कारणहरु मैले भन्नुभन्दा पनि मेरो परिवारका अन्य सदस्यहरुले नकारात्मक ढङ्गले प्रचार–प्रसार मात्रै गरेका थिएनन् कि यसो मिलेमा बरू आफ्नो साथीलाई सम्झाएर दोस्रो विवाह गराइदिनुपर्‍यो भन्नसमेत पछि परेका थिएनन् । यसरी घरतिरका सबै सदस्यहरुले मप्रति पालिराखेको नकारात्मक सोच बुझेर हो वा अपहेलित जीवन भोगेको देखेर हो, उहाँले मप्रति झन् धेरै सहानुभूति र आत्मीयता पो खन्याउनुभयो ।
बाँझी हुनाको पीडाको अगाडि अरु कुनै कुराको पनि मूल्य नै थिएन, मेरा लागि । संसारका सुखसयल, आत्मीयता आदि सबै अर्थहीन मात्रै लाग्थे मलाई ।
मेरा श्रीमान्को साथीले आफ्नोतर्फबाट हाम्रो परिवारका लागि खुसी दिन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन । उहाँ जति दिन यो घरमा बस्नुभयो त्यति नै दिन घरलाई जीवन्त राख्ने प्रयास गरी नै रहनुभयो ।
समयलाई कसले रोक्न सक्ने ? यो त अविराम चलिरहेको हुन्छ, कहिले दुःखको पहाड बोकेर त कहिले खुसीको लहर बोकेर ।
पीडाको सघन अन्धकारमा डुबिरहेको बेला आशाको उज्यालो किरण बोकेर समय मसामु झुल्किन आइपुगेको छ ।
अत्यन्तै सुखद समाचार बोकेर मछेउ आएको समयप्रति विश्वासै लागेको छैन आफैलाई । सपना हो कि विपना हो भन्दै आफैले आफैलाई चिमोटी हेरेंँ । मेरो हातमा रहेको रिपोर्ट कार्डलाई चुमिरहेँ निरन्तर सीमारहित खुसीहरु बटुल्दै । किनभने भर्खरै प्याथोलोजीबाट लिएको रिपोर्ट कार्डमा मेरो युरिन रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ लेखिएको छ । सधैँ ‘नेगेटिभ’ मात्र हेर्न अभ्यस्त मेरा आखाँहरु आज पोजेटिभ रिपोर्ट पढ्न पाएर आश्चर्यचकित भएका छन् । दिव्य बाह्र वर्षपछि बल्लबल्ल मलाई आमा हुने सौभाग्य मिल्न लागेको छ । तपस्याको फल पाउन अाँटेकी छु मैले ।
यो समाचारले मेरो घरमा खुसीको बाढी नै उर्लेको छ । थाम्नै मुस्किल पर्लाजस्तो गरी । सबैको ध्यान मप्रति नै केन्द्रित भएको छ । विशेष गरी मेरा श्रीमान्, उहाँले त झन् मेरो खानपानमा विशेष ध्यान पुर्‍याउने मात्र नभई बेलाबेलामा चेकअपका लागि डाक्टरकहाँ पुर्‍याउने, डाक्टरसँग विचार–विमर्श गर्ने, त्यसभन्दा पनि अभैm नयाँ बाबुआमाले बच्चाको स्याहार–सुसारमा जान्नुपर्नेजस्ता पुस्तकहरु किनेर पढ्ने आदिआदि गर्न थाल्नुभएको छ ।
हामी दुबै श्रीमान्–श्रीमतीले नयाँ आउने पाहुनाको अधीर भएर प्रतीक्षा गर्दागर्दै आखिर त्यो दिन पनि आएरै छाड्यो ।
म हस्पिटलमा भर्ना भइसकेकी छु । प्रसवव्यथाको पीडा पनि मीठो लागिरहेको छ ।
व्यग्र प्रतीक्षारत मेरा श्रीमान्को त झन् धैर्यको बाँध नै फुट्न लागेजस्तो छ । बारम्बार नर्सहरु ओहोर–दोहोर गरेपिच्छे उहाँको व्यग्रताको समाचार मलाई सुनाउँदै जिस्क्याइरहेका छन् । साथै उनीहरुले यो पनि भन्दै छन् विदेशमा त श्रीमतीलाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्दा श्रीमान्लाई पनि साथै बस्न अनुमति दिइन्छ रे । सायद लोग्नेमान्छेले पनि जानून् र बुझून् प्रसवको पीडा कति हदसम्म हुँदो रहेछ भनेर पनि होला । तर नेपालमा भने त्यस्तो प्रावधान छैन । ढोकाबाहिर पर्खंदै डाक्टर–नर्सहरुले कतिखेर सुसमाचार सुनाउलान् भनेर अधैर्य हुँदै कुर्नुको विकल्पबाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।
सबैले छोरा हो कि छोरी हो ? अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर भन्ने सल्लाह पनि दिन्थे । मलाई त मात्र सन्तान चाहिएको, न कि छोरा वा छोरी, सृष्टिको अनुपम उपहार जे भए पनि मलाई सहर्ष स्वीकार्य थियो । त्यो पनि अचेलको जमानामा के छोरा के छोरी ? दुबै बराबरी । बल्लबल्ल दिव्य बाह्र वर्षपछि मिल्न लागेको मातृत्वसुखको कल्पना मात्रैले पनि रोमाञ्चित र आह्लादित छु म ।
बच्चा जन्मेपछि प्राप्त भएको आत्मसन्तुष्टिको त झन् बयानै गर्न सक्दिनँ म । प्रसवव्यथाको पीडा छुमन्तर भएर कता उड्यो कता ! बच्चाको मुहार देख्नेबित्तिकै निमेषभरमै सबै हराए ।
डाक्टरले मेरो छातीमाथि भर्खरै जन्मेको शिशुलाई राखेर बधाई दिइरहनु हुँदा मैले आना खुसीहरुलाई समेट्नै सकिरहेकी थिइनँ । छताछुल्ल भएर पोखिइरहेँ । सृष्टिको अनुपम उपहार पाएर मन पागलपनको हदभन्दा बाहिर झुमिरहेको थियो, नाचिरहेको थियो, मानौँ सयौँ वसन्तहरु एकै पटक मेरा वरिपरि झुम्मिएर उत्सव मनाइरहेझैँ, मानौँ हजारौँ इन्द्रेणीहरु एकै पटक धर्ती र आकाशलाई जोड्दै झुलिरहेझैँ, ओहो ! यो अलौकिक आनन्दलाई मैले शब्दमा वर्णन गर्न सक्तिनँ, मात्रै अनुभूत गर्न सक्छु ।
आमा हुने गौरव प्राप्त गर्नु भनेको पनि ठूलै युद्ध जितेपछि मीठो रन्कोजस्तै हुँदो रहेछ ।
मलाई क्याबिनमा लगेपछि मात्रै बल्ल मेरा श्रीमान्लगायत परिवारहरुलाई भित्र आउने अनुमति प्राप्त भयो । मेरा श्रीमान् अपार हर्षका रेखाहरु अनुहारभरि कोर्दै मिठाइको प्याकेटसहित क्याबिनभित्र प्रवेश गर्नुभयो ।
मेरो छेउमा सुतिरहेको छोरातिर हान्निँदै भन्नुभयो— ‘ओहो ! मेरो छोरालाई कस्तो छ ? ल हेर कस्तो हिस्सी पारेर सुतिरहेको ! उठ छोरा उठ, तिम्रो बाबालाई हेर्न ।’ उहाँ पैसा राखेर छोराको मुहार हेर्दै गर्वले छाती फुलाइरहनुभएको छ । उहाँसँगसँगै मेरा घरपक्षका र माइतीपक्षका सबैसबै हाम्रो खुसीमा सामेल हुन आउनुभएको छ ।
सबैले पालैपालो बच्चालाई काखमा राख्दै कसैले ‘आहा ! कति राम्रो’, कसैले ‘कति सुन्दर !’, कसैले ‘कति स्वस्थ बच्चा !’ भन्दै छन् भने कसैले ‘ठ्याक्कै आमाकै अनुहारजस्तो’ भन्दै छन् । कसैले ‘हैन आधा आमा आधा बाबुजस्तो छ’ भन्दै छन् । कसैले चाहिँ ‘पूरै आफ्नै बाबाजस्तो छ’ भन्दा मेरा श्रीमान् खुसीले सातौँ आकाशमा उडिरहेझैँ देखिनुभएको छ ।
म पनि सबैको खुसीमा सामेल हुँदै सबैका टीका–टिप्पणीहरुलाई मधुर मुस्कानले सहर्ष स्विकारिरहेकी छु ।
विवाह भएको बाह्र वर्षपछि मिलेको सन्तानसुख अवर्णनीय त थियो नै, त्योभन्दा पनि अब म अपूर्ण स्वास्नीमान्छेबाट पूर्ण भएकी छु । बाँझी आइमाईको पदवीबाट मुक्ति पाएकी छु । म सन्तुष्टिका समुद्रमा पौडिरहेकी छु । उमङ्गका लहरहरु तँछाड मछाड गर्दै ममाथि उर्लिरहेका छन् ।
कति–कति दिनसम्म त घरमा भोजको सिलसिला चली नै रह्यो । खुसीले प्रज्वल्लित श्रीमान्को मुहार देखेर र आमा हुनाको गौरव प्राप्त भएर म पनि आकाशमै उडिरहेकी छु ।
मेरा उदासीहरु अब मबाट कोसौँ टाढा भागिसकेका थिए । छोरो जन्मेपछि मेरो सारा संसार छोरामै सीमित रह्यो । म निमग्न भएर छोराकै स्याहार–सुसारमा लीन भइरहेँ । मातृत्वको सुखभोगको अमृतपानले तृप्त भइरहन्थेँ । सन्तुष्टिको त कुनै सीमा नै थिएन ।
खडेरी परेर पटपटी फुटेको जमिनजस्तो मेरो जीवनमा रिमझिम–रिमझिम साउन भएर बर्सिएको मेरो छोराको हरेक क्रियाकलापबाट मिल्ने असीम सुखानुभूतिले निथु्रक्कै रूझिरहन्छु म । मेरो जीवनबाट विषादका बादलहरु हटिसकेका छन् ।
मेरा श्रीमान्को जीवनशैलीमा पनि धेरै नै अन्तर आएको छ, जमिन–आकाशजस्तै । उहाँको दिन छोराबाटै सुरू भएर छोरामै अन्त हुन्छ । बिहान उठेर भगवान्को दर्शन गर्नुको साटो छोराको दर्शन पो पहिला गर्नुहुन्छ त ! छोरालाई कुनै कुराको कमी हुन नदिन विशेष ध्यान राख्नुहुन्छ । अलिकति रूघाखोकी लाग्न पाएको छैन डाक्टरकहाँ दौडाइहाल्ने गर्नुहुन्छ । रात–बिरात केही नभनेर सधैँ चनाखो भएर बस्ने गर्नुहुन्छ । आफ्नो वंश चलाउने आफ्नो अंशप्रति ज्यानै दिऊँझैँ गर्नुहुन्छ ।
तर ! यसरी बिनारोकटोक हाम्रो गृहस्थीको गाडी चलिरहको बेला उनै गैरआवासीय साथीले पठाउनुभएको इमेलपछि त्यसमा अचानक ब्रेक लागेको छ । हाम्रो गृहस्थीमा ठूलै भुइँचालो गएको छ । सुनामी नै उठेको छ जसलाई थाम्ने सामथ्र्य ममा जुटिरहेको छैन । यो भुइँचालोले, यो सुनामीले मेरो गृहस्थीलाई तहसनहस गर्ने प्रायः निश्चितै छ ।
इमेलमा लेखिएको छ—
मलाई क्यान्सर भएको कुरा अचानकै थाहा भयो, त्यो पनि लास्ट स्टेजमा । डाक्टरले मलाई तीन महिनाजतिको मात्र समय दिएको थियो । त्यसो त मलाई मृत्युदेखि पटक्कै डर लागेको छैन । जति बाँचे भरपुर बाँचेँ, आफ्नै खुसी र इच्छाले बाँचेँ । त्यसो त हामी जन्मदै मृत्यु कबुलेरै आएका हुन्छौँ । जन्मनु–मर्नु प्रकृतिका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । एक न एक दिन त सबै त्यो माहायात्रामा सामेल हुनैपर्छ । जान्छु भनेर जान पाइने पनि होइन, जान्न भनेर सुख पाइने पनि होइन । अजम्बरी कोही छैनन्, ढिलो–चाँडोको कुरा मात्रै हो । त्यसैले मलाई कुनै अपसोच छैन आफ्नो मृत्युमा ।
तर साथी, मर्ने बेलामा मनभित्र एउटै मात्र झूटको गह्रौँ भारी बोकेर जान सकिरहेको छैन । जिन्दगीमा मैले जे गरे तापनि झूटको सहारा भने कहिल्यै लिएको थिइनँ, तर परिस्थितिले बाध्य पार्‍यो, त्यो पनि आफ्नै आत्मीय साथीको दुःखी संसारलाई सुखमय बनाउनका लागि । चुँडिन लागेको गृहस्थीको डोरी बचाउनका लागि ।
तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो मैले आजीवन विवाह नै गरिनँ । कारण खुला आकाशमा स्वतन्त्र रुपले उड्न चाहन्थेँ म । घरपरिवार र आफन्त भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो भन्ने सोचाइ राख्थेँ म । वंश चलाउने कुराको सबालमा पनि कतिले आना बाजेभन्दा माथिका पुस्ताका नाम मात्रैको समेत जानकारी राख्छन् र उनीहरुलाई सम्झिने गर्छन् । आफैलाई जन्म दिने आमाबाबुलाई त जिउँदै नर्कमा होम्न थाले भने मरेका पितृहरुका झन् के कुरा !
एक्लै जन्मने हो एक्लै मर्ने हो, फेरि यो दुःखको संसारमा दुःखै दिनका लागि सन्तानलाई जन्म दिने किन ! मान्छेले आफ्नै खुसीका लागि जन्माउँछन् सन्तान र आफ्नै खुसीका लागि हुर्काउँछ, तर त्यो सन्तानका लागि नभएर आफ्नै आत्मसन्तुष्टिका लागि गरिरहेका हुन्छन् र पनि सन्तानकै लागि गरिरहेका छौँ भन्ने भ्रम भने पाली नै रहन्छन् । सायद त्यसैले पनि होला मलाई विवाहको झमेलाभित्र बाँधिएर बस्न मनै लागेन ।
जैविक आवश्यकताका लागि मेरा नजिक पर्न आएका कुनै पनि स्त्रीलाई मैले विवाह गर्ने बाचा गरिनँ । कसम पनि खाइनँ । आपसी समझदारीभन्दा बाहिर पनि गइनँ । त्यसैले त्यस कुराप्रति कुनै पश्चाताप वा ग्लानि पनि महसुस गरेको छैन मैले ।
त्यसो त मेरो पुरूषत्वप्रति पनि यो समाज र आफन्तहरुले शङ्का व्यक्त नगरेका भने होइनन् । हो, हामी सामाजिक प्राणी हौँ, त्यसैले हामीलाई समाज चाहिन्छ पनि । तर त्यही समाजले हामीलाई आवश्यक पर्दा केही गर्दैन भने त्यो समाज पनि किन चाहियो र हामीलाई ? म जे छु त्यो मलाई नै थाहा हुने कुरा हो न कि समाजलाई । समाजले के भन्ला, के सोच्ला भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार राखिनँ मैले र’पनि म एउटा स्वस्थ र पूर्ण पुरूष हुँ भन्ने ज्ञानचाहिँ थियो मलाई ।
जब म तिम्रो घर पुगेँ, तिम्रो गृहस्थी देखेपछि तिमीहरुमा सन्तानको तीव्र अभिलाषा रहेको पाएँ । भाउजू त झन् सन्तान सुखको चाहनामा सधैँ निराश–निराश र उदास–उदास देख्दा मेरो आत्माले मेरो साथीको गृहस्थी बचाउन एउटा खुसी दिऊँ न त भन्ने सोचेर सन्तान सुखभोग गर्नका लागि उपहार दिनु सायद मेरो नियति पनि हुन सक्छ । मैले आफ्नो वीर्यदानपछि तिमीलाई भनेको थिएँ, कुनैकुनै पुरूष विवाह भएको दशबाह्र वर्षपछि पनि बाबु बन्न सक्षम हुन सक्छन् । मैले त्यस्ता थुप्रै मान्छेहरु भेटेको छु देखेको छु भनेर झूटै सही तिमीलाई आश्वासन दिएको थिएँ । तिमीले मेरो त्यो झूटलाई साँचो सम्झेर विश्वास गर्‍यौ । मलाई आज त्यही झूटले नराम्ररी पोलिरहेको छ र सन्तोषपूर्वक मर्न रोकिरहेको छ ।
त्यसो त तिम्रो वंश चलाउने उत्तराधिकारी दिनुबाहेक मेरो अन्य कुनै स्वार्थ थिएन, न त कुनै गलत उद्देश्य नै थियो । थियो भने एउटै उद्देश्य थियो, त्यो हो साथीको गृहस्थीमा लागेको ग्रहणलाई हटाइदिने न कि साथीप्रतिको विश्वासघात । भाउजूसँग भएको मेरो सम्पर्कमा लेस मात्र पनि वासनाको गन्ध थिएन । थियो भने, मात्र सन्तान सुखको अनमोल रत्न तिमीहरुको पोल्टामा राखिदिने ।
अहिले आएर भने कताकता मनभित्र एउटा गाँठो परेझैँ भएको छ । सायद त्यो मेरो भूल पो थियो कि भन्ने अपराधबोधले ग्रस्त पारिरहेकोे छ, जसबाट मुक्त हुन चाहेकाले तिमीलाई खुलस्त पार्न इमेल लेख्दै छु ।
म विदेश फर्केलगत्तै तिमीले इमेलमार्फत आफू बाबु बन्न लागेको सुसमाचार, बाबु बनेपछि संसारभरिको खुसी मिलेको समाचार, छोराको न्वारान, पास्नीलगायत हरेक क्रियाकलापबारे बढाइ–चढाइ गरेर लेखी पठाउँदा र विशेष गरी भाउजूका सबै उदासीका बादलहरु हटेर जीवनमा छर्लङ्ग घाम लागेको बेहोरा जनाउँदा मलाई पनि अपार सन्तुष्टि मिलेको थियो । मेरो एउटा झूटले कसैको जिन्दगी नै बदलिन्छ भने, हजार खुसी मिल्छ भने, आत्महत्याको हदसम्म निराश भएकी भाउजूलाई नयाँ जीवन दिन्छ भने, त्यो झूटबाट पाप नलाग्ने सोचेर आफ्नो मनलाई आफैले सान्त्वना दिइरहेको अवस्थामा अनायासैै थाहा लागेको मेरो यो रोग, त्यो पनि यस्तो अन्तिम अवस्थामा आउँदा भने आफ्नो झूटलाई आफैसँग लुकाउन सकिनँ मैले, आफ्नै छातीभित्र गाड्न सकिनँ साथी मैले ।
त्यो एउटा झूट नै मेरा लागि भारी भएको छ । त्यो झूटको गह्रौँ भारी बोकेर मर्न नचाहेरै तिमीलाई यो इमेल पठाउन बाध्य भएँ । तिमीले मेरो विवशता र अवस्था बुझेर मलाई माफ दिनेछौ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
तिमीले अन्यथा पटक्कै नसोच्नू साथी ! त्यो तिमीहरुकै छोरो हो, त्यसमा मेरो शारीरिक र मानसिक कुनै दाबी नै छैन । ममा रत्तीभर पनि स्वार्थ रहेको भए, छोराको मोह राखेको भए, म उतै आउन पनि त सक्थेँ, वा कुनै बहाना बनाएर तिमीहरुलाई यतै आउन बाध्य पार्न पनि त सक्थेँ, तर मैले त्यसो पनि त गरिनँ ।
यसभन्दा अगाडि भने मेरो हिसाबले गल्ती गरेजस्तो मलाई पटक्कै लागेको थिएन । मात्र एउटा राम्रो कार्य वा पुण्य कार्यको लागि बोलेको त होजस्तो लाग्थ्यो । फेरि कसैको खुसीको लागि वा ज्यान बचाउनका लागि गरेको पापलाई पाप पनि सोचिँदैन होला भन्ने सोच्थेँ । भगवान्ले पनि क्षमा नै देला भन्ने लाग्थ्यो, तर अहिले मर्ने बेलामा आएर भने मनले त्यो कुरा मान्दै नमानेकोले तिमीलाई इमेल लेख्दै छु । यदि तिमी पनि मैले गल्ती नै गरेको सोच्छौ भने, पाप नै गरेको ठान्छौ भने मलाई क्षमा गर !
मैले कमाएको अपार सम्पत्तिलाई धेरै हदसम्म ट्रस्टमा राखिदिएको छु । नेपालमा द्वन्द्वपीडित असहाय महिला र बालबालिकाहरुका लागि सुरू गर्न लागेको कार्य पनि अधुरै भयो । आशा छ, मेरो त्यो इच्छालाई तिमीले अवश्य पूरा गरिदिनेछौ । मेरो सम्पूर्ण ट्रस्टको संरक्षक तिमीलाई नै बनाएको छु । बाँकी केही अंश भने तिमीहरुको छोराको नाउँमा राखिदिएको छु । केही अंश भए पनि सायद निकै धेरै नै हुनेछ नेपालका लागि ।
मेरो मृत्युपछि मात्रै मेरो वकिल सबै कागज–पत्रहरु लिएर तिमीकहाँ आउनेछ । मैले सारा बन्दोबस्त मिलाइसकेको छु । मैले मेरो वकिललाई तिम्रो पूरा नाम ठेगाना, टेलिफोन, इमेल ठेगाना आदि दिइसकेको छु । मलाई पूरा विश्वास छ, तिमीले मेरो अन्तिम सपनालाई जरूर पूरा गर्ने छौ ।
डाक्टरले दिएको समय पूरा हुन अब दुईचार दिन मात्रै बाँकी छ । बडो मुस्किलले इमेल लेख्दै छु । यो इमेल तिमीले प्राप्त गरून्जेल सायद म यस धराबाट हराइसकेको पनि हुन सक्छु ।
मृत्युशय्यामा भएको तिम्रो यो आत्मीय साथी जो एउटै मात्र झूटको बोझ बोकेरसमेत त्यो महायात्रामा जान चाहेको छैन भन्ने मेरो भावनालाई बुझिदिनेछौ । कदर गरिदिनेछौ र मलाई आफ्नो हृदयको गहिराइबाटै क्षमा दिनेछौ । यही विश्वासका साथ यो इमेल पठाउँदै छु । अलबिदा... साथी... अलबिदा...।’
इमेलमा लेखिएका एक–एक शब्दहरु मेरा श्रीमान्को लागि कालकूट विषसमान भएका छन् । मैले पनि कुनै दिन यस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ला भन्ने सोच दिमागमै नराखेकोले असमञ्जसमा परेकी छु । उहाँको अनुहारको रङ्ग हेर्दा प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै हुनुहुन्छजस्तो लाग्यो र त्यसैले आजसम्म बाँधेर राखेको मेरो मनको बाँधलाई भत्काउँदै भन्न थालेँ, ‘म निराशको सघन अन्धकारभित्र रुमल्लिरहेको बेला आशाको शीतल किरण बोकेर तपाईंको साथी जून भएर मेरो औँसीको रातजस्तो जीवनमा उदाउनुभयो, मानौँ उहाँ महाभारतको व्यास भएर मेरो जीवनमा मात्र एकैछिनका लागि प्रवेश गर्नुभयो । मनभित्र आमा बन्ने चाहना यति हदसम्म थियो कि मैले जुनसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि पछि हट्नेवाला थिइनँ । पत्नी–धर्मलाई ममताको मोहले यस्तरी छोप्यो कि एकैछिनका लागि म पनि पत्नीधर्मबाट विमुख भएँ वा यसो भनौँ एकैछिनका लागि कमजोर भएँ । म अर्कै दुनियाँमा आफै हराएँ अथवा समाजको शब्दमा भन्नुपर्दा केही छिनका लागि भट्किएर बाटो नै बिराएँ रे वा गल्ती नै गरेँ रे, तर तपाईं पुरूषहरुले चाहिँ बाँझोपन सिर्फ आइमाईबाट मात्रै हुनेझैँ गरी समाजमा भ्रम फैलाउँदै आना गल्तीलाई लुकाउँदाचाहिँ गल्ती नहुने ! स्त्रीले चाहिँ जे गर्दा पनि गल्ती हुने ! सजाय भोग्नै पर्ने ! मैले पनि त्यही समाजमा गएर म बाँझी होइन, बरू मेरो श्रीमान् नै बाँझो हुनुहुन्छ भनेर ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै हिँडेकी भए ! तपाईंको पुरूषत्वको खिल्ली उडाएको भए ! तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो !
मभित्र आमा बन्ने लालसा यति बिघ्न थियो, जुन तपाईंबाट पूर्ण हुने सम्भावना नै थिएन । तपाईंले आफ्नो साथीले दिनुभएको सात्वनालाई साँचो सम्झेर छोरालाई आफ्नै अंश सोच्नुभयो । तर मलाई भने थाहा भइसकेको थियो, तपाईंले मलाई आमा हुने सुख जीवनभर दिन सक्नु हुन्न भनेर । किनभने तपाईं आधा मात्रै लोग्नेमान्छे भएर पनि पूर्ण भएर बाँचिरहनुभएको थियो भने म पूर्ण स्वास्नीमान्छे भएर पनि आधा भएर बाँच्न अभिशप्त थिएँ ।
म पूर्ण रुपले आमा हुन सक्षम छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मैले सौता हाल्न मानेकै थिएँ । सरोगेट मदर स्वीकार्न पनि तयार भएकी थिएँ । तपाईं आफै मान्नु भएन । सरोगेट मदर स्वीकार्न सक्ने समाजले सरोगेट फादर पनि त स्विकार्ने हिम्मत गर्नुपर्‍यो नि !!
मैले पहिल्यै सबै कुरा साँचो–साँचो बताइदिने सोच पनि बारम्बार नबनाएको होइन, तर दशबाह्र वर्षपछि कुनै–कुनै व्यक्ति बाबु बन्न सक्छन् भनेकै भरमा तपाईंले आफ्नो साथीको कुरा पत्याउनुभयो र आफै बाबु बन्न लागेको सोच राख्नुभएर खुसी हुनुभएको देखेर तपाईंको त्यो खुसीलाई छिन्न चाहिनँ मैले । त्यस्तो कुरा भनिदिएर तपाईंलाई दुखी पार्न चाहिनँ मैले । मेरो एउटै झूटले कसैको जीवनमा बहार ल्याइदिन्छ भने, यति धेरै खुसी दिन्छ भने त्यो झूट पाप नभएर पुण्य नै हो भन्ने सोचेर आफ्नो ओठलाई नचाहेरै पनि सिलाइरहेँ ।
यो कुरा थाहा नहँुदासम्म तपाईंले छोरालाई आफ्नै अंश सम्झेर मायाको सागरभित्र पौडाएरै राख्नुभयो र मायाको चास्नीले हुर्काउनुभयो । अहिलेसम्म त यो कुरा हामी दुईलाई बाहेक कसैलाई थाहा छैन । तर यदि तपाईंले हामी दुबैलाई अस्वीकार गर्नुभयो भने, यो कुरा थाहा पाउनासाथ दूधमा परेको झिङ्गाझैँ मिल्काउनुभयो भने एक कान दुई कान मैदान हुनेछ । जसको घाटा मैलेभन्दा बढी तपाईंले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
जीवनमा म मात्र एक पटक, त्यो पनि मेरा लागि मात्रै नभएर हामी दुबैका लागि पत्नीधर्मबाट विचलित भएँ, केवल सन्तानप्राप्तिका लागि ।
एकैछिनका लागि मैले मेरो यो देह तपाईंको साथीलाई सुम्पे पनि मेरो आत्माभित्र त्यति बेला पनि तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो । हामी दुईबीच न रोमान्स नै थियो, न माया नै थियो, न त वासना नै ।
यदि तपाईंको सट्टा मेरोतर्फबाट बच्चा हुन नसकेकोे भए तपाईंले म भनेरै सन्तान सुखबाट वञ्चित भएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो होला त ! अर्की श्रीमती ल्याएर वा रखौटी नै राखेर भए पनि तपाईंले सन्तान सुख प्राप्त गर्नु हुने थिएन होला त ! आत्मासाक्षी राखेर भन्नुहोस् त !
जसरी आज मैले मेरो मन खोलेर भनेँ, त्यस्तै गरी तपाईंले पनि मन खोलेर साँचोसाँचो भन्नुहोस् मलाई । लोग्नेमान्छेले जे गरे पनि छुट हुने त्यही कुरा स्वास्नीमान्छेले गर्दा भने पाप हुने ! एक्काइसौँ शताब्दी टेकिसक्दा पनि उही सदियौँदेखिकै भेदभाव किन सहिरहनुपर्ने ! दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनाको पीडा कतिन्जेल भोगिरहनुपर्ने !
यदि आज मैले तपाईंलाई, तपाईंको गृहस्थीलाई वा यो घरको सङ्घारलाई समेत नाघेर जानुपरे पनि मनमा कुनै अपसोच हुने छैन मलाई । तपाईंको नाउँको बैशाखीबिना पनि मज्जाले हिँड्न सक्छु म । आमा बन्ने सौभाग्य प्राप्त हुनु नै पर्याप्त भएको छ मलाई । किनकि म पूर्ण स्वास्नीमान्छे भएकी छु, ‘म’ हुनुको अर्थ भेटेकी छु । सही मानेमा मेरो नयाँ जन्म भएको छ, अर्थात् मैले पुनर्जन्म पाएकी छु । त्यसैले आफूले गरेको गल्तीप्रति कुनै पछुतो छैन मलाई । केही छ भने आफू छु र आफूभित्र नयाँ उमङ्ग छ, नयाँ उत्साह छ, नयाँ जोस र जाँगर छ । बाहिर खुला आकाशले हात फैलाउँदै मलाई बोलाइरहेको छ, त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा त मसँग मेरो छोरो छ ।’
मनको बाँध भत्किएर एकसाथ निस्किएको ज्वारभाटाले मेरा श्रीमान्लाई पूरै असर गरिरहेजस्तो... उहाँ अवाक् भएर टोलाइरहनुभएको छ . . . ।